YEYINTNGE(CANADA): Saturday, October 04
ဒါကလဲ High Class လူပို့တဲ့သူတွေပဲလုပ်နိုင်တာပါ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/04/20140အကြံပြုခြင်း
ဒီညနေ ဘန်ကောက်ပို့စ်က စစ်ဆေးသူများကို ပြန်စစ်ဆေးခြင်း ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တက်လာပါတယ်။
မနေ့က အင်ဒရူး ရဲ့ ၀က်ဆိုက်ကနေ ပြီးတော့ တရားခံများကို စစ်ဆေးရာ တွင် နှိပ်စက်ခြင်းဆိုပြီး သတင်းတက်လာပါတယ်။ အင်ဒရူးဟာ သူ့ရဲ့ သတင်းကို အင်္ဂလန်သံအမတ်နဲ့လည်း အတည်ပြုပြီး သံအမတ်က အတည်ပြုထားပေးပါတယ်။ ဒီပုံတွေက မြန်မာသံရုံးကို ပို့ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာတွေဘက်ကလည်း သွားရောက် စစ်ဆေးနေကြောင်း ပြောလည်း ပြောထားပါတယ်။
ပထမ ခြင်းလုံးခတ်နေတဲ့ ၉ ဦးကို ဖမ်းရာမှာ အမှုနဲ့ အခုပက်သက်နေတဲ့ ၃ ဦးက
တောထဲထွက်ပြေးသွားစဉ်မှာ ကျန် ၆ ဥိးကို နှိပ်စက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ၃ ဦးအကြောင်းမေးမြန်းစစ်ဆေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။
( ကျနော်ပြောချင်တာ တခုက အင်္ဂလန် သံအမတ်က မှန်ကြောင်းအတည်ပြုထားလို့ ထိုင်းအစိုးရအတွက် အနေကြပ်စ၇ာဖြစ်သွားပါပြီ။ ထိုင်းအစိုးရအတွက် အနေကျပ်သွားလို့ ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေလည်း အနေကျပ်ပါပြီ။
သံရုံးကို ဓာတ်ပုံတွေ ပို့တာလည်း ပါတယ်။ အနှိပ်စက်ခံလူတွေလည်း web site မှာ တွေ့ လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ သံရုံးကတဆင့် အင်ဒရူးဆီ ဘာလို့ရောက်သွားတာလဲ။ သတင်းရောင်းစားတာလား။ သံရုံးက သူများတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို နားမလည်ဘူးလား။ ကျွန်းသားတွေကိုလည်း ကျနော်ပြောပါမယ် နောက်တခါကျရင် ဒီလို ပုံတွေမပို့ပဲ ဒါဏ်ရာနဲ့ သတင်းလောက်ပဲ ပေးပါ။ သူတို့လာစစ်လို့ ကိုယ်ထင်ပြရတယ်ဆိုလည်း ပြသနာမရှိပါဘူး။)
ထိုင်းမှာ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကို သွားရောက်ကူညီရေး မေးမြန်းချက်
အကျီအဖြူနဲ့ သူက ကိုရဲ (စကားပြန်) ဆူရတ်မှာနေတယ်၊ အင်္ကျီအပြာနဲ့ နဲ့က ကိုကမာ (ကော့စမုံက ရိုတီရောင်းသူ) ။ဘာသာပြန်တယောက်က ရဲ နဲ့ ပေါင်းပြီး ကျွန်းက ဗမာတွေကို ဒုက္ခပေးပေးနေကြလို့ပြောတယ်။(လင်းယုန်မာန်)
ပုန်းခိုနေခဲ့ရပြီးမနက်ကျမှအဲ့ဒီKoh Tao ကျွန်းကနေထွက်ခွာခဲ့သည်။Koh Tao သည်
Mr. Sean, please come back for Myanmar
Sean ဆိုတာ ဒီကောင်ပဲ။
အမှုကို အစထုတ်တယ်။ ပြီးတော့မရှင်းခဲ့ဘူး။ ပြီး တော့ တ၀က်လိမ် တ၀က်အမှန် လုပ်သွားတယ်။
ရဲစစ်တုံးက ဒီဒါဏ်ရာ စက်ဘီးမှောက်တာတဲ့။ CSI ကူညီပေးမှပဲ ရှင်းတော့တယ်။ CSI က ယုံကြည်တာက သူဟာ ဒေးဗစ်နဲ့ လူသတ်သမား ရန်ဖြစ်တာကို ကူညီပေးခဲ့တယ် လို့ ယူဆပါတယ်။
ကဲ AC က brothers တွေုSean ဟာ တိုးရစ်သက်သက်မဟုတ်ပဲ အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားဖြစ်ကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ မထွက်လာခင် ဘယ်သူ ပြောကြမလဲ။
ဒီပုံကို အမှုလိုက်မဲ့ ရှေ့နေတွေ အတွက် အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရက။ သူ့ကိုပေးပြန်တာ သံသယရှိစရာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် အမှုလိုက်မဲ့သူတွေ Sean ကိုinterpol ကနေတဆင့် ခေါ်ခိုင်းတာပါ။
Boon Myo Myo စာမျက်နှာမှ
Ya Zar Doe
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း စူရတ်ဋ္ဌာနီ ခရိုင် ကော့တောင် (လိပ်ကျွန်း) မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှု မှာ
သေဆုံးသူဟန်နာ၇ဲ. ဖုန်းကို အခန်းမှာကျန်ခဲ့လို. ဟန်နာ၇ဲ.သူငယ်ချင်းတွေက အခင်းဖြစ်ပြီးကတည်းက ၇ဲစခန်းမှာ အပ်နှံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပြီး ။
အခု မှ မြန်မာ ကောင်လေး ၂ ယောက် အိမ်နောက်မှာ တွေ.တယ်ဆိုပြီး သတင်းထုတ်ပြန်တာကရော ရိုးသားမှု.ရှိသတဲ့လား ။
“จนผลดีเอ็นเอ ที่ปรากฏในตัวผู้ตาย (น.ส.ฮานนาห์) ตรงกับ2คน คือ เวพิว หรือ วิน และนายซอวิน หรือ โซเชน ส่วนนายเมาไม่มีดีเอ็นเอในตัวผู้ตาย ซึ่งสอบนายเมาไม่มีส่วนร่วมกระทำผิด (ข่มขืน) ซึ่งดีเอ็นเอเป็น 1 ในพยานหลักฐานจับคนร้าย และเมื่อคืนตำรวจบนเกาะเต่า ได้ค้นบ้านพักนายวิน ได้พบโทรศัพท์มือถือผู้ตายถูกทิ้งไว้ใกล้เคียง ที่จะเป็นหลักฐานใช้มัดตัวผู้ต้องหาให้ได้หลังจากทราบว่า โทรศัพท์มือถือของผู้ตายหายไป” พล.ต.อ.สมยศ กล่าว http://www.thairath.co.th/content/454397
Credit to => CSI LA CSI 's survey
- ရဲလင်းထက် - တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်
- ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၁၀)၊ အမှတ် (၃၈)။
နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါက နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်ရှိလာမည်။ ထိုအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာလည်း အရေးပါလာမည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရှုမြင်ပုံ၊ ပြင်ဆင်ထားမှုနှင့် ခိုင်မာတည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းကို ရှမ်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းမ်မှ ခေတ္တတွေ့ဆုံခိုက် မေးမြန်းထားသည်များကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ဖိတ် ခေါ်ထားတာရှိသလို နိုင်ငံရေးမူဘောင်တွေချမှတ်ဖို့ နိုင်ငံ ရေးပါတီတွေကလည်း ပြင်ဆင်နေကြတော့ လက်ရှိအချိန် မှာရော နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါ ပြီလား။
နိုင်ငံရေးမူဘောင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မစဉ်းစားသေး ဘူးဗျ။ ငြိမ်းချမ်းရေးက အကုန်လုံးမှမရသေးတာကို။ ဒါက တစ်အချက်၊ နောက်တစ်ခုက ဘယ်တော့ရမလဲ မသေချာ သေးတော့ မသိသေးဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်မှု တော့ရှိထားပြီးသား။ မကြာပါဘူး တစ်ပတ်နဲ့ပဲ ပြီးသွားနိုင် ပါတယ်။
NCCT နဲ့ UPWC တို့ တွေ့ဆုံမှုအပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့လာတာတွေလည်းရှိတော့ SNLD ပါတီ ဘက်ကရော ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။
ကျွန်တော်တို့က UNFC နဲ့ မဟာမိတ်ရှိတာပဲ။ သူ တို့နဲ့ကွာပြီး ရေးလို့မရဘူးလား။ သူတို့မူ ကျွန်တော်တို့မူနဲ့ တစ်ထပ်တည်းမကျလေတောင် သူ့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ် ဖို့ဘဲ အရေးကြီးတာပဲ။ UNFC ကလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ ကွာစရာအကြောင်းတော့ မရှိပါဘူး။ မခက်ပါဘူး။ ကျွန် တော်တို့ဘက်ကတော့။
အခုလက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ တချို့တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ တပ်မတော်တို့ကြားမှာ အပြန်အလှန် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့ အာမခံချက်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်အောင်၊ ခိုင်မာအောင် ဘယ်လိုတွေဆောင် ရွက်ဖို့သင့်ပါသလဲ။
တိုက်ခိုက်တာ ဘယ်အဆင့်ထိလဲဆိုတာ ရှိတာကို အထက်မှာသွားဖြစ်ရင် တစ်မျိုးပေါ့။ ခုတော့ အောက်ခြေ မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ တိုက်ခိုက်မှုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတော့ မထိဘူးထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အချိန်မှာတော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က အ များကြီးစဉ်းစားရတော့မယ်လေ။ တာဝန်ယူမှု ရှိရတော့ မှာပေါ့။ ခုဟာက ငြိမ်းချမ်းရေးက မနက်ဖြန် သန်ဘက် ဆွေးနွေးတော့မယ် တိုက်တုန်းဆိုတာလိုပေါ့။ ဟိုတုန်းက လည်း အဲဒီလိုပဲလေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရင်း ဖြစ်လာ ကြတယ်ဆိုတော့ ကချင်တို့၊ ဝတို့၊ ပလောင်တို့ အခုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းပြောမယ်၊ တိုက် လည်း တိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးတော့ သဘာဝ မကျဘူးလေ။ ပြောတာလည်း သိပ်ပြီး အရာရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါဆို ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အာမခံချက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။
အဓိကကတော့ သည်းခံဖို့ အရေးကြီးတယ်။ နား လည်မှုရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ လိုတယ်။ တိုက်ရင်းနဲ့ ဆွေးနွေးမယ်၊ ဆွေးနွေးရင်းနဲ့တိုက် မယ်ဆိုတာ ဘယ်အဖွဲ့မှာမှ မူမရှိသေးဘူး။ ရှိလာရင်လည်း မကောင်းတော့ဘူးပေါ့။ အဲဒါပါပဲ။ နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ မတိုက်ဖို့ဘဲ အရေးကြီးတာပဲ။
တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင် တာတွေက ယုံကြည်မှုနည်းနေတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။
ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခု ပေါင်းစည်းရေးအခြေအနေကရော ဘယ်လိုတွေ ဆက်လုပ်နေတာရှိပါသလဲခင်ဗျ။
လက်ရှိအချိန်ကတော့ ဒီကိစ္စက အဲဒါတွေပြီးမှသာ ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြမှာပါ။ နိုဝင်ဘာလောက်ဆိုရင်တော့ အကြမ်းဖျင်း ကျွန်တော်တို့ ပြဋ္ဌာန်းဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော် တို့ ဆွေးနွေးရမယ့် အကြောင်းအရာပါပဲ။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ လွှတ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက လည်း အရေးပါလာတော့ လက်ရှိလွှတ်တော်ကို ဘယ် လို သုံးသပ်လို့ရမလဲခင်ဗျ။
ထင်သာမြင်သာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ဟာ ဒီဝဲအောက်ကနေ ထွက်လို့မရသေးပါဘူး။ ဘာကြီး ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဒီလွှတ်တော်ကြီးက တစ်နည်းပြောလို့ရှိ ရင် ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ကျွန်တော်ထင်တယ် သူတို့ ရေးလိုက်တဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာ ပြင်သင့်ပါပြီ။ ဒီအခြေခံ ဥပဒေပြင်မှလည်းရမယ့်ကိစ္စပါ။ အခြေခံဥပဒေမပြင်မချင်း တော့ ဒီဟာတွေက ဖြေရှင်းလို့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လွှတ် တော်ဟာ ထင်သာမြင်သာမရှိဘူး။ လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း အပြင်ကပြည်သူ နဲ့ ဆက်သွယ်မှုက မရှိခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ အတွင်းကလူက ဘာလုပ်နေတယ်၊ အပြင်ကလူက ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လျွဲန်ူနခအငသည မပြဘူး။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရတို့ကြား လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာ နိုင်ငံ ရေးပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ပြောလိုတာရှိရင် ပြော ကြားပေးပါခင်ဗျာ။
ဒီနေ့ဒီအခါ အရေးကြီးတာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးကလည်း သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ တချို့ကလည်း ပြောရရင် ဆန္ဒစောလွန်းတယ်။ တချို့ကလည်း အကောင်း မမြင်ဘူး။ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ကျွန်တော်တို့ မြင်နေ တာကတော့ အချင်းချင်း လက်ခံစကားပြောမယ်။ မနေ့ တစ်နေ့က တိုက်နေတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမျိုးတွေကလည်း မကောင်းပါဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက်ပဲ မကောင်းတဲ့အစဉ် အလာတွေပါ။ တကယ်တမ်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတယ် ဆိုရင်တော့ အတိုက်အခိုက်တွေရပ်သင့်နေပါပြီ။ ဒါမှသာ လျှင် တိုင်းပြည်က ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင် လူထုရဲ့ကြိုးစား မှု နောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကလည်း အစိုးရရဲ့ယုံကြည် မှုကို ဒီလိုပဲယူရမှာပါပဲ။ အစိုးရဆီက ဒီလို ယုံကြည်မှုရဖို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနဲ့ တိုက်ယူရမှာပါပဲ။ ဒါမှ မဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးက ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ ပြောပြောနေကျအတိုင်းပဲ အန္တရာယ်က ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ လွှတ်တော်ကလဲ ထင် သာမြင်သာရှိအောင် လုပ်ရမယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို ၂ဝ၁၅ အမီ ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ။ ဘယ်စနစ်နဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုတာ ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ ရောက်မယ့်စနစ်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ အား လုံးပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဝ နယ်နှင့် ကပ်လျက် ရှိသည့် သံလွင် အနောက်ခြမ်း စစ်ရေးမဟာဗျူဟာ
(၃)၁၈-၅-၂၀၁၄ရက်နေ့ လည်တွင်မိမိအားဖောင်းကတာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေလာခေါ်
မတွေ့ ရပဲရွာသားများသည်တရုတ်များဘေးတွင်ဝိုင်းထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်၊၊
ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးထား
သည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာ (အဝေးသင်)ကျောင်းသူ ဗကသ
အဖွဲ့ဝင် မဖြူနှင်းထွေးကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်ခရိုင် တရားရုံးတွင် စက်တင်ဘာ
၃၀ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲက တတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။